भोली मंसिर ३० गते तपाईको भाग्यफल कस्तो छ ? पढ्नुहोस – Jaljala Online
भोली मंसिर ३० गते तपाईको भाग्यफल कस्तो छ ? पढ्नुहोस
Posted on December 15, 2019 December 15, 2019 Author Jaljala Online	Comment(0)
भोली मिति २०७६ साल मंसिर महिनाको ३० गते सोमबार रहेको छ । मेष-रक्तचाप विरामीहरुले खासगरी आफ्नो स्वास्थ्यको अतिरिक्त ध्यान राख्नुपर्छ। आमाबाबुको सहायताले गर्दा वित्तीय बाधाहरु टर्दै गएको जस्तो देखिन्छ। सकारात्मक र सहयोगी साथीहरूसँग बाहिर जानुहोस्। आफ्नो प्रियसँग सानो छुट्टी मनाइरहेकाहरूको लागि अत्यधिक स्मरणीय समय हुनेछ। आज तपाईंले आफ्नो जोडीका प्रेमको चरम देख्नु हुनेछ।
वृष-पाईंले आफ्नो शरीर रिचार्ज गर्न पुरा आराम गर्नुपर्छ अन्यथा थकानले तपाईंलाई निराशावादी बनाउन सक्छ। तपाईंमा छिट्टो पैसा कमाउने इच्छा हुनेछ। पत्नीसँगको झगडाले मानसिक तनाउ उत्पन्न गर्न सक्छ। अनावश्यक तनाउ लिनुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन। हामीले बदल्न नसक्ने कुराहरूलाई स्वीकार गर्न सिक्नु जीवनमा एउटा ठूलो कुरा हो। आज आफ्नो प्रियको भावना बुझ्नुहोस्। कुनै तर्कमा परेर कठोर टिप्पणी दिनबाट बच्नुहोस्। आजको दिन “पागल हुने” दिन हो! तपाईं आफ्नो जोडीसित प्रेम र रोमान्सको टुप्पामा पुग्नु हुनेछ।
मिथुन-भोली तपाइको लागि मनोरञ्जनमा खेल गतिविधिहरु र घर बाहिरका कार्यहरू समावेश हुनुपर्छ। यो आफ्नो तर्फबाट धेरै प्रयास नगरिकन अरूको ध्यान आकर्षित गर्ने राम्रो दिन हो। आज, तपाईं र तपाईंको प्रेमी प्रेमको सागरमा तल्लीन हुनुहुनेछ, र प्रेमको उँचो अनुभव गर्नुहुनेछ। केही मनोरञ्जनका लागि राम्रो दिन। आज तपाईंले आफ्नो जोडीसित साँच्चै रमाइलो साँझ बिताउन सक्नु हुनेछ।
कर्कट-घाँटी / पिठ्युँको लगातार दुखाइले पीडित हुन सक्नुहुन्छ। सामान्य कमजोरी पनि भएमा यसलाई बेवास्ता नगर्नुहोस्। आज अरू सबै धेरै महत्त्वपूर्ण हुनेछ। आमाबाबुको सहायताले गर्दा वित्तीय बाधाहरु टर्दै गएको जस्तो देखिन्छ। आफ्नो परिवारलाई उचित समय दिनुहोस्। तिनीहरूलाई तपाईंले ध्यान दिनुहुन्छ भन्ने महसुस गराउनुहोस्। तिनीहरूसँग आफ्नो गुणस्तरको समय बिताउनुहोस्। गुनासो गर्ने कुनै पनि मौका नदिनुहोस्। तपाईंका मुस्कानको कुनै अर्थ छैन – तपाईंका हास्यको कुनै आवाज छैन – तपाईंलाई सामिप्य नहुनाले मुटुले धडकन बिर्सन्छ ।
शिंह-तपाईंको बाल्य प्रकृति निस्किने छ र तपाईंमा चञ्चल मुड आउनेछ। पारिवारिकसँग सम्बन्ध र बन्धनको नवीकरणका लागि उचित दिन। आज, तपाईं र तपाईंको प्रेमी प्रेमको सागरमा तल्लीन हुनुहुनेछ, र प्रेमको उँचो अनुभव गर्नुहुनेछ। तपाईंलाई आज लामो समय पछि आफ्नो जोडीबाट साँच्चै मायाले भरिएको र न्यानो अंगालो प्राप्त हुनेछ। कन्या-इच्छा शक्तिको कमीले तपाईंलाई भावनात्मक र मनोवृत्तिको सिकार बनाउन सक्छ। ढिलो भएका भुक्तानी प्राप्त भएकोले पैसाको समस्यामा सुधार भएको छ। नातिनातिनाहरू खुशी गराउने राम्रा स्रोत हुनेछन्। तपाईंले केही प्रेम बाँडेमा, तपाईंकी प्रियतमा आज तपाईंको लागि एउटा दूतको रूपमा परिणत हुनेछिन्। आफ्नो जोडीको निर्दोष कार्यले आज तपाईंको दिन शानदार बनाउनेछ!
तुला-तपाईंको मन हालका घटनाहरूले विचलित गर्नेछन्। ध्यान र योग आध्यात्मिक साथै भौतिक लाभको लागि लाभदायी साबित हुनेछन्। तपाईंको जिद्दी व्यवहारले घर र आफ्नो घनिष्ठ मित्रलाई पनि कलंकित गर्दछ। आज केही प्राकृतिक सौन्दर्यद्वारा तपाईं चकाचौंद हुने सम्भावना छ। आफ्नो जीवनसाथीले तपाईंलाई सबैभन्दा खुशी व्यक्ति बनाउन आज धेरै प्रयास गर्नेछन्।
वृश्चिक-स्वास्थ्य राम्रो रहन्छ। अचल सम्पत्ति र वित्तीय कारोबारका लागि राम्रो दिन हो। घरेलु कामले तपाईंलाई अधिकांश समय व्यस्त राख्नेछ। आज कोही तपाईंको प्रेम बीच आउन सक्छ। आज तपाईंको जोडीले तपाईंको आवश्यकतालाई सन्तुष्ट गर्न अस्वीकार गर्न सक्छ, जसले गर्दा अन्ततः तपाईंलाई निराशा हुन सक्छ।
धनु-आफ्नो स्वास्थ्य बारेमा चिन्ता नगर्नुहोस्। यो रोग विरुद्ध शक्तिशाली खोप हो। तपाईंको सही मनोवृत्तिले गलत मनोवृत्तिलाई हराउनेछ। तपाईंलाई व्यापार क्रेडिटको दृष्टिकोणले भेट गर्न आउनेहरूको वास्ता नगर्नुहोस्। अरूलाई प्रभावित गर्ने तपाईंको क्षमताले फाइदा पुर्याउनेछ। आज तपाईंलाई प्रेमको वरदान प्राप्त हुने देखिन्छ। आज बिहान तपाईंलाई केही प्राप्त हुन सक्छ जसले गर्दा तपाईंको आफ्नो सम्पूर्ण दिन रमाइलो हुनेछ।
मकर-आफ्नो मनमा सकारात्मक विचार ल्याउनुहोस्। यो आफ्नो तर्फबाट धेरै प्रयास नगरिकन अरूको ध्यान आकर्षित गर्ने राम्रो दिन हो। आज आफ्नो प्रेमीलाई निराश नबनाउनुहोस् किनकि पछि पछुताउनु पर्न सक्छ। तपाईंले आफ्नो जीवनसाथीलाई नभएर अन्य कसैलाई आफ्नो नियन्त्रण गर्ने मौका दिनुभयो भने, तपाईंले आफ्नो जीवनसाथीको प्रतिकूल प्रतिक्रिया पाउन सक्नु हुनेछ।
कुंभ-अन्य विरुद्ध आफ्नो दूषित-इच्छा प्रकट गर्नाले मानसिक तनाउ दिनेछ। तपाईंले यस्ता विचारहरूलाई ध्यान दिनु हुँदैन किनकि यिनीहरू जीवन बर्वाद गर्ने हुन् र तपाईंको दक्षता मार्नेछन्। साँझ तिर अचानक आएको सुसमाचारले सम्पूर्ण परिवारमा आनन्द र खुशी ल्याउँछ। तपाईंको साहसले प्रेमलाई जीत्नेछ। के तपाईंलाई वैवाहिक जीवन समझौता मात्रै हो भन्ने लाग्छ? यदि हो भने, तपाईंलाई आज थाहा लाग्नेछ कि यस्तो राम्रो कुरा कहिल्यै तपाईंको जीवनमा भएको थिएन।
मीन -साथीलाई केही गलत अर्थ लाउनाले तपाईंको लागि अप्रिय प्रतिक्रिया आउन सक्छ – कुनै पनि निर्णय पारित गर्नु अघि सन्तुलित दृष्टिकोण बनाउनुहोस्। आर्थिक सुधार निश्चित छ। आफ्नो परिवारका सदस्यहरूको लाभको लागि सकारात्मक सोचाइले आफ्नो शक्ति र विभिन्न सुझावहरू दिएर आफ्नो उपयोगिताको विकास गर्नुहोस्। आँखाले कहिल्यै झूठ बोल्दैन र आफ्नो साथीको आँखाले तपाईंलाई साँच्चै आज केहि विशेष भन्नेछन्।
असाेज २६ देखि कार्तिक २ गतेसम्म तपाईको भाग्यफल कस्तो छ ? आजै थाहा पाउनुहोस्
Posted on October 13, 2019 Author Jaljala Online
२०७६ साल असोज २६ देखि कार्तिक २ गतेसम्म राशिअनुसारको प्रत्यकको भाग्यफल कस्तो रहेको छ सबैले हेर्नुहोला । पहिलो राशि रहेको छ मेष (प्रारम्भमा केही दौडधुप र खर्च गर्नुपरे पनि मिहिनेतले चिताएको काम सम्पादन हुनेछ। चुनौती पन्छाउँदै समुदायको हक हितको संरक्षण गर्न सकिनेछ। प्रतिष्ठित काम गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ। बुधवारपछि केही विवादास्पद जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्दा दुस्ख […]
विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले दिए यस्तो चुनौती !
Posted on May 21, 2019 Author Jaljala Online
जेठ ७, काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आफूले भ्रष्टाचार गरेको प्रमाणित भए झुण्डिएर मर्ने चेतावनी दिएका छन् ।घिसिङले नेपाल विद्युत प्राधिकरणभित्र भ्रष्टाचार भए/नभएको सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन छानबिन समिति गठन गरिएको पनि स्पष्ट पारे । मंगलबार संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा सत्तारुढ नेकपाका सांसद अमनलाल मोदीले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइन उपयोग […]
मलेसिया, साउदी, दुबई, कतार लगाएत देशको पैसाको मूल्य कति छ ? हेर्नुस
आज २०७६ मंसिर ३० गते सोमबार तपाईको राशिफल कस्तो छ ? पढ्नुहोस